Sida loo qaabeeyo kiniiniga Android: Dhammaan siyaabaha | War gadget
Eder Esteban | | Android, Tababarada
Waqtiga xaadirka ah, kiniiniyada ugu badan ee suuqa yaala waxay isticmaalaan Android sida nidaamka qalliinka. Marka xulashada moodooyinka suuqa ayaa ugu ballaadhan. Sidaa darteed, waa inaad had iyo jeer haysataa dhinacyada qaarkood tixgelinta marka aad iibsanayso kiniin cusub. Muddo ka dib, waxaa jiri kara dhibaatooyin kiniinkaas ah.
Waxaa laga yaabaa inay dhacdo in khayaanada qaar ay ku siibatay, ama inay dhibaatooyin ka jiraan howlaheeda. Ama milkiilaha ayaa ka fikiraya inuu iibiyo. Xaaladaha noocaas ah, xal aad u soo noqnoqda ee kiniiniyada Android waa inaad ku sharraxdo qaabeynta.
1 Waa maxay qaabaynta kiniiniga Android?
2 U qaabee kiniinka Android
2.1 Ka diyaari dejinta
2.2 U qaabee kiniin ka soo kabashada menu
Waa maxay qaabaynta kiniiniga Android?
Xaalada qalabka Android, sida kaniiniga, waxaan ka hadli karnaa qaabeynta ama soo celinta warshadda. Nidaamkani wuxuu ka dhigan yahay in dhammaan xogta ku jirta kiniiniga la tirtiray. Markaa dhammaan faylasha ku jira (sawirro, fiidiyowyo, muusig, dukumiintiyo, iwm) marka lagu daro codsiyada la soo dejiyey, gebi ahaanba waa la tirtiri doonaa. Ma jiri doono raad raaca feylashaasi kaniiniga.
Tani waa geedi socod cadaalad daran, laakiin way dhacdaa ayaa sheegay in kiniiniga Android uu ku soo laabto xaaladdiisii ​​hore. Tan iyo markii la qaabeynayo, waxay ku laabanaysaa gobolkii ay uga baxday warshadda. Taasi waa sababta ay sidoo kale loo yaqaan dib u soo celinta warshadda. Tani waa wax la sameeyo waqtiyo cayiman, maaddaama macnaheedu yahay luminta dhammaan xogta ku jirta kiniinka su'aasha ah.
Waayo, haddii milkiiluhu ka fikirayo inuu iibiyo kaniiniga la yiraahdo, ama aad siiso qof kale, waa hab fiican oo looga hortago qofkaas inuu marin u helo xogtaada. Sidoo kale haddii fayras soo galay, waxa ku dhici kara aaladaha Android, qaabeynta ayaa ah hab looga saaro, haddii aysan jirin ikhtiyaar kale oo ku shaqeeya macnahaas. Marka xaaladaha qaarkood, waa wax la qaban karo. Si aad ugu hesho kiniin, waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan. Foomamka aan hoos kuugu sheegayno.
U qaabee kiniinka Android
Waxyaabaha caadiga ah ayaa ah in kiniiniyada Android ay jiraan dhowr siyaabood oo kala duwan oo lagu fuliyo qaabeynta. Labada xaaladoodba waa wax aan ka heli karno kiniinka laftiisa. Uma baahnid qalab dheeri ah si aad ugu qaabeysid. In kasta oo ay jiri karaan moodello aan noo oggolaanayn midkood labadan xulasho. Waxay ku xirnaan kartaa nooc kasta ama nooc kasta, marka lagu daro nooca nidaamka hawlgalka aad isticmaasho.
Ka diyaari dejinta
Habka ugu horreeya ee loo qaabeeyo kiniin ah 'Android' wuxuu ka yimaadaa goobahaaga. Dhexdooda waxaa ku jira qayb ay suurtogal tahay in lagu bilaabo hawshan. Sidaa darteed, waa inaan marka hore furno meelihiisa. Markaad gudaha gasho, goobta gaarka ah ee shaqadani way ka beddeli kartaa hal nooc oo mid kale ah.
Kiniiniyada qaarkood waa inaan galno qaybta amniga. Halka kuwa kale ay tahay qaybta ikhtiyaariyada horumarsan ee ay tahay inaan galno. Si kastaba xaalku ha ahaadee, iyadoon loo eegin goobtaada, qaybta na danaysa waxaa loo yaqaan Backup / Restore. Sidaa darteed, waan raadin karnaa haddii aysan ku jirin dejinta kiniinkeenna Android si ay ugu dhakhso badan tahay in loo helo kiniinka. Mar uun qaybtan, hawshu way bilaabmi kartaa.
Waxa ugu horeeya ee dadka isticmaala la waydiiyo ayaa ah hadaad rabto inaad sameyso keyd. Sida markii la qaabeynayo waxaan ka tirtiri doonnaa dhammaan xogta kiniinka, way fiicantahay in la sameeyo nuqul ka mid ah xogtaas aanad rabin inaad lumiso. Xaaladda Android, waxaan si fudud ugu keydin karnaa keydka Google Drive. Markaad dhahdo nuqul, markaa waa macquul inaad gasho qaybta soo celinta xogta Warshada.
Qeybtaan hawsha qaabaynta kiniinku wuu bilaabmayaa. Isticmaalaha ayaa la weydiin doonaa haddii uu hubo waxa uu doonayo inuu sameeyo. Haddii aad horey u laheyd nuucaan oo kale, markaa waad bilaabi kartaa hadda. Marka waa inaad siisaa si aad u aqbasho. Kadib, qaabeynta kiniinkan Android ayaa bilaaban doona. Waxay qaadan kartaa daqiiqado in la dhammeeyo, waxay kuxirantahay xaddiga xogta ku keydsan.
U qaabee kiniin ka soo kabashada menu
Waxaa jira qaab labaad, oo had iyo jeer waxtar u leh qaabaynta kiniiniga 'Android'. Waxay ku saabsan tahay adeegsiga waxa loogu yeero soo-kabashada. Helitaankeeda ayaa ku kala duwanaan doona hal nooc illaa mid kale, maadaama ay jiraan laba nidaam. Midka hore waa in la xidho kaniiniga, ka dibna la ilaaliyo badhanka awooda iyo mugga isla mar ahaantaana la riixo isla wakhti yar ilbiriqsiyo ah, illaa ay ka muuqato shaashadda shaashadda. Xaaladda labaad, nidaamku waa isku mid, kaliya waxaa jira kiniinno ay tahay inaad riixdo oo aad hoos u dhigto mugga.
Sidaa darteed, waxay kuxirantahay nooca kiniinka la sheegay, waxaa jira marin loo helo meeniska la yiri. Marka habka su'aasha la isticmaalay, menu leh xulashooyin kala duwan ayaa lagu soo bandhigaa shaashadda. Mid ka mid ah xulashooyinka shaashadda ayaa ah Dib-u-warshadaynta Warshadaha ama Wipe data, labada magacba xaalado badan ayey ka muuqan karaan. Tani waa ikhtiyaarka aad rabto inaad isticmaasho wakhtigaas.
Adiga oo isticmaalaya badhanka mugga iyo hoosba waa inaad u dhexeysa xulashooyinkaas. Markaad gaadho ikhtiyaarka ah inaad tirtirto xogta, waa inaad isticmaal badhanka awoodda kiniinka si aad u xaqiijiso. Shaashadda ayaa soo bandhigi doonta farriin weydineysa isticmaaleha haddii ay hubto inay doonayaan inay sidan sameeyaan. Sababtoo ah hawsha qaabeynta ayaa loo yidhi kiniinka Android ayaa bilaaban doona. Si loo xaqiijiyo, taabo batoonka mar labaad.
Sidan oo kale, qaabeynta kiniinka Android-ka ah ayaa la bilaabi doonaa. Mar labaad, hawshu waxay qaadan doontaa dhawr daqiiqo in lagu dhammaystiro kiniinka. Markii la dhammeeyo, farriin ayaa ka soo muuqan doonta shaashadda. Si aad mar labaad u bilowdo, waxa caadiga ah waa inaad ku qasabtaa dooro ikhtiyaarka "reboot system now". Sidan oo kale, nidaamku mar kale ayuu bilaabmaa, laakiin dhammaan xogta horeyba looga tirtiray kiniinka. Ku noqo gobolkii ay ka baxday warshada.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Android » Sida loo qaabeeyo kiniiniga Android
Motorola Sonic Boost, afhayeenka wireless leh Alexa qiimo jaban